E-Commerce Archives - T-WORK SYSTEM
E-Commerce software သုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
By T-WORK SYSTEM | March 28, 2017 | 0
E-Commerce (Electronic Commerce) ဆိုသည်မှာ Internet ပေါ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်း ဝယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ E-Commerce Software ကိုအသုံးပြု၍ ရောင်းချခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများကိုဦးစွာ ပြောပြချင်ပါသည်။ 1. သင့်တင့်သော ငွေအရင်းအနှီးဖြင့် သင့်၏ ဈေးကွက်ကို နိုင်ငံတွင်းသာမက ပြည်ပနိုင်ငံများထိပါ တိုးချဲ့ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ 2. ဝန်ထမ်းစရိတ်များ၊ ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ရသည့်စရိတ်များ ကိုလျော့ချနိုင်သည်။ 3. Digital စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဘောင်ချာများ၊ စာရင်းဇယားများ၊ အကျိုးအမြတ်များတွက်ချက်ရခြင်း စသော အလုပ်ရှုပ် ပင်ပန်းသည့် အရာများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 4.Customerများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတွင်လည်း24/7 ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောကြောင့်ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများပြားလာပြီးပိုမိုအောင်မြင်သော Online Shop တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါသည်။ 5. မိမိတို့၏ ဆိုင်တည်နေရာ၊ ပုံစံ၊ ကုန်ပေးပို့နိုင်သော Delivery စနစ်များ၊ ငွေပေးချေမှု ပုံစံများ၊…
သင်၏ အရောင်းဆိုင်ကို နိုင်ငံတကာတွင်ရောင်းချနေသော အွန်လိုင်းစတိုးအသွင်ဖန်တီး ရောင်းချလိုပါသလား ???
သင့် Online Shop ကို ခေတ်နှင့်အညီ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်းပြီး ဖွင့်လှစ်ရောင်းချရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။ အွန်လိုင်းစတိုးနှင့်ပတ်သက်သည့်နည်းပညာအသိရှိသူဖြစ်စေမရှိဖြစ်စေ Computer တစ်လုံးနှင့် အချိန်မိနစ် 30 ခန့်ပေးရုံဖြင့် အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုကို စတင်တည်ဆောက်နိုင်ပါပြီ။ အွန်လိုင်းစတိုးတည်ဆောက်ရာမှာ ဘယ်လို Software တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်မလဲဆိုတာကို ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းစတိုးဖွင့်လှစ်ရောင်းချခြင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ Software(E-Commerce Platform) နှစ်ခုရှိပါတယ် ။ Shopify နဲ့ WordPress+Woo Commerce တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Shopify ကိုအသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့Loginဝင်၍ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့အဆင်သင့်စတင်ရောင်းချနိုင် ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်ဈေးများခြင်းငွေပေးချေမှုအပိုင်းမှာ ကန့်သတ်ထားခြင်းတွေက အားနည်းချက်အဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ WordPress + Woo Commerce ကိုပိုမိုရွေးချယ်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းစတိုးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်သုံးချက်ကတော့ နံပါတ်တစ် Domain Name (eg. storename.com)…